कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतोे ? – rastriyakhabar.com
कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतोे ?
छाला कालो, खस्रो हुनु विभिन्न किसिमका फोका, दाग, घाउ आउनुलाई छालाको समस्या वा रोग भनिन्छ। छालाको रंग चम्किलो खालको हुन्छ। स्वस्थ छाला र अस्वस्थ छाला राम्ररी चिन्न सकिन्छ। महिलामा छालाको विषेश महत्व हुन्छ। छालाले सुन्दरताले अत्यन्त महत्व राख्दछ।
छालाको स्वस्थताले नै सुन्दरताको विशेषता झल्काउँछ। सुन्दर र स्वस्थ छाला भयो भने सुन्दरतामा अत्यन्त चमक आउँछ । छालाले साथ दियो भने सुन्दरताको लागि सुनमा सुगन्ध हुन्छ । छालाको सुन्दरता जोगाई राख्न केही होसियारी अपनाउनु पर्दछ।
छालामा लाग्ने हुने विभिन्न समस्या र रोगका बारेमा जानकारी राख्न सके यसले हामीलाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउँछ। स्वस्थ छालाले मानिसलाई सफलतामा पु¥याउँछ। सुन्दरता नचाहने कोही पनि हुँदैंन। छालाको सुन्दरतासँगै मनको सुन्दरता पनि आवश्यकता हुन्छ। मनको सुन्दरताले छालालाई सुन्दर बनाउँछ र स्वस्थता प्रदान गर्दछ।
सामान्य छालाको कोषलाई मेलानोसाइटिस भनिन्छ। जुन कोषहरुले मेलानिन नामक तत्व उत्पादन गर्दछन् जसले छालालाई रंग प्रदान गर्दछन्। छालामा मेलानिनको मात्रा ठीक्क भएमा छाला राम्रो देखिन्छ। मेलानिन बढी भएमा कालो देखिन्छ। थोरै मेलानिनको मात्रा निस्केमा छाला पहेंलो नराम्रो देखिन्छ। बढी मेलानिन निस्केमा ठाउँ वरिपरि कालो छाला आएको भनिन्छ । यो बिस्तारै शरीरमा फैलिदै जान्छ।
१० कहिलेकाही छालामा संक्रमण हुँदा छालाका कोषमा आउने गडबडीले मेलानिन उत्पादन बढी भई छालामा असर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा समयमा उपचार गराउनुपर्छ।
२० आइरन चक्की खाईरहे, यसको मात्रा बढी भएमा पनि कालोपोतो देखिन सक्छ। वा अन्य कुनै औषधिले पनि कालोपोतो निकालिदिन सक्छ।
३० इण्डोक्राइन रोग वा कुनै किसिमको हार्मोनल रोगहरु जस्तै थाइराइड, सुगर, पाठेघरको समस्या, पेट तथा मिर्गौलाका समस्या भएमा छालाका रोग देखिन सक्छन्। समयमा उपचार नभएमा छालाका कोषमा गडबडी आई छालाका रोग तथा कालोपोतो आउन सक्छ।
४० खुल्ला घाममा हिँड्दा घाममा हुने पराबैजनी किरणमा आउने विकिरणका कारण छालाका कोषमा गडबडी आई कालोपोतो देखिन्छ। घामको विकिरणको मात्रा बढी भई छालामा गडबडी देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बढी गर्मीबाट बच्ने तथा सनस्क्रीन क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, धेरैपटक मुख धुने गर्दा छाला बिग्रन पाउँदैन। कालोपोतो उपचार पछि कतिपयलाई आइरहने भएकाले उच्च किसिमको उपचार तथा सल्लाह आवश्यक पर्दछ। उपचारका क्रममा विभिन्न किसिमका छाला चम्काउने वा कालो भएका भागलाई छोप्ने क्रिम पाइन्छन्।
कालोपोतो फाल्ने भनेर बनाएका औषधि पनि पाइन्छन् । यस्ता औषधि लगाउँदा २१ दिन अर्थात् तीन हप्ताभन्दा बढी नियमित नलगाउने यसपछि त्यसको फाइदा तथा बेफाइदा हेरेर सल्लाहअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।